War hada naga oo gaadhey magaalad Diri Dhaba ayaa sheegaya in uu maanta oo Jimca ah banaanbax balaadhan ka dhacey magaaladaas. Banaanbxaas oo bilowdey saalada Jimca kadib ayaa si aad ah looga dareemayaa dhamaan daafaha magaalada.
Banaanbaxan oo ka mid ah kacdoonka shacabka Ogadeniya ay ku diidanyihiin gumeysiga Itoobiya iyo gacanyarayaashiisa maamula Jigjiga ayaa hada socda mudo ka badan todobaad. Dadka dibad baxaya ayaa watey boorar ay ku qoranyhiin ereyo ka dhan ah Dawladda Itoobbiya, boorarakaas oo ku qoran luuqadaha Soomaaliga, Ingriis iyo Amxaariga. Ereyada ku qoraan boorarka wax ka mid ahaa “Waxaan rabaa xornimo .. “We need Freedom” iyo erayo kale oo ka dhan ah taliska TPLF iyo Ina Iley.” Dibad baxayaasha oo careysan ayaa buuq iyo sawaxan ku dhexmarey jidadka magaalada Diri Dhaba.
Warku wuxuu intaas ku darayaa oo kale in gadoodka shacabka laga dareemayo Gobolada Liibaan iyo Faafan.
Diri Dhaba waa magaalada ugu weyn Ogadeniya, isla markaana waa magalaada labaad waxa loogu yeero dalka Itoobbiya. Xukumda Wayaanaha ayaa ka faramaroojisey gacanta Soomaalida oo ay ku tilmaantey in Diri Dhaba tahay magaalo dhex-dhexaad ah oo aaney qoomiyad gooni ah lahayn.
PreviousUPDATE: The Pregnant Mother who delivered twins with Scars after being beaten by the Ethiopian soldiers.
NextSomalis continue to protest against the Ethiopian human rights abuses in Dire Dawa